Isimo sezulu sezulu selanga ezintathu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amalanga amathathu eRussia
Cha, asikhulumi ngokuvela kwamanye amalanga amabili, kepha sikhuluma ngawo into yesimo sezulu eyenzeka kaningi kodwa, nokho, kuyaqhubeka kunganakwa ngoba, njengoba sazi, umuntu akufanele abheke ngqo enkanyezini yelanga ngoba ingalimaza ukubona kwethu.
Amalanga amathathu ayisinye isibonelo sendlela imvelo engavamile ngayo, futhi ... nokuthi imicabango yabantu inamandla kangakanani, okungasenza sikholelwe ukuthi imikhumbi engaphandle komhlaba izosivakashela. Ngokuqinisekile kungumqondo okhangayo kuningi lethu (kufaka phakathi nami), kodwa ngokudabukisayo akunjalo. Noma kunjalo, kusengumbukwane onelukuluku osidonsela amehlo ngamandla.
Ngaphakathi kwamafu kunezinhlayiya eziningi zeqhwa. Ukukhanya kwelanga, lapho kushayisana nazo, kuveza umphumela obonakalayo obizwa nge-parhelion osenza sicabange ukuthi inkanyezi iphindaphindekile. Yize okuvame kakhulu ukuthi »amanye amalanga amabili» avela ku-22º ezinhlangothini zombili zeLanga (njengoba ubona esithombeni esihola i-athikili), nazo zingavela zisondelene kakhulu, zakhe uhlobo lonxantathu oluncane kakhulu ukuphakama.
Kwesinye isikhathi zihambisana nalokho okwaziwa ngokuthi ama-halos, ezikhumbuza uthingo olubonakala luzungeze ilanga futhi lwakhiwe ngendlela efanayo nomphumela wanamuhla wokukhanya. Lokhu kuvela kakhulu ezindaweni ezibandayo zoMhlaba, kepha uma endaweni yakho ebusika amazinga okushisa aphansi kakhulu, ungajabulela nobuhle bawo.
Amalanga amathathu athathwe izithombe ezingxenyeni ezahlukahlukene zomhlaba, phakathi kokunye: i-Argentina, iChina kanye nezindawo eziningi zase-Europe. Isikhathi sokugcina sasisedolobheni laseRussia iChelyabinsk ngoFebhuwari 17, lapho impela babemangele ebabona.
Futhi wena, wake wakwazi ukubona lesi simo? Ucabangani ngakho?
Amalanga amathathu eChina
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amalanga amathathu esibhakabhakeni!
U-Ignacio Pasrano kusho
UDisemba 16, 2015 ngezikhathi zasekuseni le nto yabonwa esimweni lapho isilinganiso sokushisa saminyaka yonke siphakathi kuka-23 ° kuya ku-30 ​​°, amalanga amathathu abonwa ephelezelwa uthingo oluphendukezelwe
Phendula ku-ignacio pasrano
UCarlos Casas kusho
Agasti 05, 2016 isimo se-parhelion sethulwe edolobheni lasePlato Magdalena (eColombia) futhi siseduze nendawo ye-Equatorial okuyinto engavamile kakhulu ukubona lo mbukiso, kodwa omuhle
Phendula uCarlos Casas
Ngicabanga ukuthi imikhumbi-mkhathi yomfokazi ayihlanganise lutho nale ndatshana futhi iqinisekisa ukuthi ayikho, kufanele uvuleleke kuwo wonke amathuba, kungenjalo okuhle.